Waa Sidee Xaalada Amni ee Magaalada Baydhabo ee Xarunta gobolka Bay?
BAYDHABO (Garsoor Online) — Guddoomiyaha Degmada Baydhabo ee Gobolka Baay C/laahi Cali Maxamed (Watiin) ayaa waxa uu ka hadlay ammaanka guud ee Magaalada Baydhabo. C/laahi Cali Maxamed (Watiin) Guddoomiyaha Degmada Baydhabo ee Gobolka Baay ayaa waxa uu sheegay ammaanka guud ee Magaalada Baydhabo in uu yahay mid la isku haleyn karo. Guddoomiye Watiin ayaa dhalinyarada...
MD Galmudug oo Ka Hadlay Mooshinka ay Ka Gudbiyeen Xildhibaanada Maamulkaasi
CADAADO (Garsoor Online) — Madaxweynaha Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed, ayaa ka hadlay mooshin ay ka diyaariyeen xildhibaano badan oo ka tirsan baarlamaanka maamulka Galmudug. Jawaabtaan ayuu Cabdikariin Guuleed bixiyay saacado kadib markii mooshin cusub ay ka gudbiyeen xildhibaanada Galmudug. Madaxweynaha Galmudug wuxuu ugu baaqay xildhibaanada baarlamaanka inay...